संखुवासभामा चारदलीय संयन्त्र गठन
प्रदेश नं. १ : पौष महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी पुरस्कार नविन श्रेष्ठलाई
सिन्धुली । सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका ४ मा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। हरिहरपुरगढी गाउँपालिका ४ बाह्रबीसेमा ना ५ त ५०६३ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा हरिहपुरगढी गाउँपालिका ३ का ३५ वर्षीया काजीमान जिम्बाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बालुवा लिएर गुडिरहेको ट्याक्टर पल्टिंदा जिम्वाको घटना स्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी...
काठमाण्डौ । नेकपा (माओवादी) केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले कोरोनाको महामारी कम नभएसम्म जनपरिचालनका कामको जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ । आज पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले बाँकी रहेका सङ्गठनात्मक काम टुङ्ग्याउने जिम्मा पनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० लाई दिने निर्णय गरेको...
गठबन्धन संखुवासभाको निर्णयः अरुण तेश्रो प्रभावितहरुको समस्या समाधान प्राथमिकतामा राख्ने
एमाले ताप्लेजुङ अध्यक्षमा थेबे
जोमसोम । हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि विनियोजित कुल पुँजिगत विकास खर्च १ अर्व ९७ करोड ३४ लाख मध्ये चालु आवको ६ महिना...
सन् २०२१ मा १ लाख ५० हजारभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक..
कांग्रेसको केन्द्र र प्रदेशमा निर्वाचित नेतृत्वलाई संखुवासभामा भब्य स्वागत (फोटो फिचर)
खाँदबारी । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेसनबाट निर्वाचित संखुवासभाका नेताहरुलाई गृह जिल्लामा भब्य स्वागत गरिएको छ । नेपाल तरुण दलले तुम्लिङटार एयरपोर्टबाट खाँदबारीसम्म मोटर साईकल र्यालीले स्वागत गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा (क) कार्य समितिले पार्टी कार्यालयमा शुभकामना कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेसनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित तारामान […]
संखुवासभा । ‘बिहान उठ्नेबित्तिकै हिमाल देख्‍न पाइयोस्‚ यी हातले सधैँ सधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस्‘’। रामकृष्ण ढकालको स्वारमा रहेको यस गीत र संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट देखिएको मकालु हिमालको दृश्यसँग मिल्दो छ। हिउँद लागेसँगै सफा नीलो आकाशलाई पृष्ठभूमि बनाउँदै मकालु हिमाल मुस्कुराएको देख्नेले सधैं हिमालको दृश्यावलोकन गर्न पाइरहूँ भन्ने इच्छा गर्छन्। मकालु संसारको पाँचौँ र नेपालको चौथो […]
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका किमाथांकामा बाक्लो हिमपात परेपछी जनजीवन कष्टकर बनेको छ । शुक्रबार साँझदेखि हिमपात सुरु भएपछि जनजीवन कष्टकर बनेको हो । बाक्लो हिउँका कारण किमाथाङ्काका बस्ती नै छोपिएको दृष्यमा देख्न सकिन्छ । हिमपातका कारण पशु चौपायहरुमा बढी असर पुगेको छ भने नागरिकहरु घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । बाँधिएका पशु चौपायलाई घाँस […]
संखुवासभा / पूर्वको टिएमजे (तिनजुरे,मिल्के र जलजले) क्षेत्रमा रहेको गुफा पोखरी पर्यटीयक रूपमा कहलिएको गन्तव्य हो । तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङको संगमस्थलमा रहेको पोखरी पर्यटकहरूको मुख्य रोजाइमा पर्दै आएको छ । आकाश खुलेसँगै चारैतिर टल्किए रहेको हिमाल । आफ्नै छायाँ प्रतिबिम्बित हुने सुन्दर पोखरी । यही पोखरीमा दैनिक सयौँ पर्यटकहरू रमाई रहेका हुन्छन् । सानो […]
हेर्नुहोस पांमा कप फुटबल प्रतियोगिताको समापनको दिनको फोटोहरु
खाँदबारी । लोहोरुङ क्लव खाँदबारी ४ मांमाले आयोजना गरेको पाँचौ पांमा कप भुटबल प्रतियोगिता सोमबार सम्पन्न भएको छ । समापन कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्य पुर्ण प्रसाद राईको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरु र जनप्रतिनिधीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । फुटबल प्रतियोगिताको विजेता दानाबारी युथ क्लव पाँचखपन नगरपालिकाले जितेको […]
षडानन्द नगरपालिका ६ स्थीत घ्याम्पे रंगशाला (फोटो फिचर)
खाँदबारी । यो षडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर ६ साल्मामा रहेको घ्याम्पे रंगशाला हो । विचको भुभाग कटिङ गरि निर्माण गरिएको यो रंगशाला षडानन्द नगरपालिका र प्रदेश १ सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको हो । यस रंगशालामा पालिका स्तरका विभिन्न खेलकुदहरु सञ्चालन गरिदै आएको छ । तस्बिरः ध्यान कुलुङ
केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। तस्बिरमा एउटा चितुवाले मुखमा मृत बाँदर झुण्ड्याइरहेको छ। बाँदरको मृत शरीरमा उसको बच्चा टाँसिएको देखिन्छ। यस हृदयविदारक क्षणलाई क्यामरामा कैद गर्ने व्यक्ति पूर्वी अफ्रिकामा रहेको जाम्बियाका वन्यजन्तु फोटोग्राफर शफीक मुल्ला हुन्। उनले उक्त फोटो अक्टोबर १४ मा जाम्बियाको दक्षिणमा अवस्थित लुआङवा राष्ट्रिय निकुञ्जमा खिचेका […]
सदरमुकाम देखि मकालु वेश क्याम्पसम्मको सुन्दरता
विश्वको पाँचौ अग्लो शिखर मकालु हिमाल (८,४८५ मी.) संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका वडा नं. २ मा पर्छ । यहीँ हिमालको आसपास साहसिक धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल शिवधारा (४,३१० मी.), पार्वती गुफा पनि रहेको छ । यी क्षेत्रहरुमा विशेष गरी जनै पुर्णिमामा पर्यटक तथा भत्तजनहरु पुग्ने गरेका छन् । बरुण उपत्यकाको रुपमा रहेको यो क्षेत्र उच्च हिमाली […]
काठमाडौं । नेपाली फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ को प्रदर्शन स्थगित गरिएको छ। माघ १९ देखि प्रदर्शनमा आउने भनिएको फिल्मको प्रदर्शन कोरोनाका कारण स्थगित गरिएको हो। यसअघि २०७६ फागुन ३० देखि प्रदर्शनमा आउने भनिएको फिल्म कोरोनाकै कारण रोकिएको थियो। त्यसपछि आगामी माघ १९ देखि फिल्म प्रदर्शन गर्ने तयारीमा निर्माण...
बिनोद किराँतीको पहिलो पुस्तक ‘संघर्षका छालहरु’...
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को मेगा अक्सनका लागि नेपालबाट कुल १५ खेलाडीले नाम दर्ता गराएका छन् । आईपीएल २०२२ को प्लेअर अक्सनका लागि कुल १२१४ खेलाडीले नाम दर्ता गराएको र त्यसमा नेपालबाट १५ खेलाडी रहेको बीसीसीआईले जनाएको छ । खेलाडी दर्ताका लागि २० जनवरीसम्मको समयसिमा तोकिएको थियो ।...
कोरोना परीक्षणको शुल्क घट्यो, अब सरकारीमा ८०० निजीमा १५०० रुपैयाँ
हिम्भा नेपालद्धारा खाँदबारीको हिमाविलाई ल्यापटप सहयोग
शिलिचोङमा नमस्तेको फोरजी सेवा
अन्जु पन्त र मेलिना राईलाई भेट्न पाए भाग्यमानी ठान्थेंः एस्थर..
एस्थर कुलुङ पछिल्लो समय गायन क्षेत्रमा संघर्ष गरिरहेकी एक उदियमान कलाकार हुन् । संगीत विषयको औपचारिक अध्ययन नगरेकी उनी गीत गाउनमा माहिर छन् । हालसम्म उनले आधा दर्जन भन्दा बढी गीत रेकर्ड गराईसकेकी छिन् । उनै एस्थरसँग पत्रकार ध्यान कुलुङले कार्यक्रम ‘अन्तरंग’का लागि गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।